Aadaa: Gabaan uffata aadaa Oromoofi qophiin Irreechaa baranaa maal fakkaata? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAadaa: Gabaan uffata aadaa Oromoofi qophiin Irreechaa baranaa maal fakkaata?
Aadaa: Gabaan uffata aadaa Oromoofi qophiin Irreechaa baranaa maal fakkaata?
Ayyaanni Irreechaa waltajjii Oromoonni miliyoonaan uffannaa aadaa Godinoota adda addaa uffatanii bakka tokkotti mul’atan, diizaayiniiwwan uffata aadaa haaraa kalaqamanis irratti muldhatudha.
(bbcafaanoromoo)—-Ayyaanichaaf dhuunfaafi gareedhaan namuu dursee itti qophaa’ee namuu ittiin faayamee irreeffata.
Magaala Finfinnee irraa kan dubbisne shamarree Meeroob Hirphaayyee, Irreechi yoo yaadamu jalqaba kan sammuu kiyyatti dhufu uffannaa aadaati jetti.
“Irreechi yeroo dhihaatu jalqaba kanin yaadu waa’ee uffannaa aadaati. Uffata aadaa Oromoo keessaa kan godina kamii, diizaayinii akkamiitin uffadheen irreefadha kan jedhun yaada. Hiriyoota kiyya waliinis dursinee irratti mari’anna,” jetti.
Waltajjii Irreechaa kanarratti uffannaa aadaa bareedina qabu uffatanii warra kaanirra bahanii mul’achuun akka ishee gammachiisus himti.
Bara kana garuu Ayyaanni Irreechaa nama murtaa’een qofa kabajama waan jedhameef qophii dhuunfaa malee gareedhaan qophaa’uu akka hin dandeenyes himti.
“Barana Irreecha deemuufi hafuu kiyyawuu hin beeku. Garuu uffata yoon deeme nan uffadha jedhu qopheefadheera. Uffannaa aadaa godina adda addaas karaa miidiyaa hawaasummaa kiyyaan hedduu beeksisaan jira. Namootni haa beekan haa filatan jedheetin kana godha,” jetti Meeroob.
Magaala Adaamaatti mana uffata aadaa kan qabdu Aadde Faaxee Huseen, torbeewwan dura Irreechi akka kabajamuu fi dhiisuyyuu waan hin murtoofnef gabaan uffata aadaa sochii hin qabu ture jetti.
“Bara darbe namni ji’a tokko dursee qophaa’aa ture. Barana Irreechi jiraachuu dhiisuu mala jedhanii namuu ofqabaa ture. Erga abbootiin Gadaa akka ayyaanichi kabajamu murteessanii xiqqoo fooyya’iinsa mul’iseera,” jetti.
Torbee darbe kana keessa magaala Adaamaa iddoowwan uffannaan aadaa itti gurguramutti sochiin fooyyee qabu tureera.
Ayyaanni Irreechaa baranaa nama muraasa qofaan Irreefatama sabaab jedhameef bittaafi gurgurtaan uffannaa aadaa Oromoo kuni magaala Finfinneettis hedduu qabbanaa’ee akka jiru achtti daldala uffata aadaa Oromoo irratti kan bobbaate Tsiyoon Balaay nutti himteetti.
“Gabaan uffata aadaa Oromoo yeroo Irreechaa kan bara darbeefi barana gidduu garaagarummaa guddaa jira. Nama tokko tokko qofatu bitachaa jira. Kunimmoo sababa Koronaavaayirasitin Irreechi nama muraasan haa kabajamu waan jedhameef,” jetti.
Akkaataa kabaja Irreecha baranaa irratti daangefamni kaahame fedhiifi gabaa uffata aadaa Oromoo kana qabbneessus Irreechi garuu uffata aadaa Oromoo beeksisuu keessatti gahee guddaa qaba jedhu namoonni dubbisne kunneen.
Tolaa diiduu yomuu dirqamaa diiduu.!!
Lakki nuu dhiisi jennan diide nuu lalatuu yoo qeerroon sitti mudde Best music
New2020 Shimallis AbbaabbuYartuu Nu Tuffachise Tolli Keenya
Irreecha 2020 #Afrikaa kibbaa Akka ajaa’ibaattii irreefachuuf jirra.
IRREECHA: Hora Finfinnee (Sanbata), Hora Bishooftuu (Dilbata)